ဝမ်းနည်းမနေနဲ့ | Ko Rohingya
လူဆိုတာ ၀မ်းနည်းတတ်တယ်။ ပျော်ရွှင်တတ်တယ်။ စိတ်ကျတတ်တယ်။ စိတ်တက်ကြွတတ်တယ်။ လောကမှာ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ပူးဆွေးခြင်း၊ သောကရောက်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ စတဲ့ခံစားချက်တွေကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ဘေးဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံနေရပါတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာ ကြုံလာတိုင်း မိတ်ဆွေ ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ၀မ်းနည်းစရာတွေ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ မူရင်းက အာရဗီဘာသာစကားနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။ အူရ်ဒူနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွေလည်း ရှိနေပါပြီ။ ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ ပညာရှင်ကတော့ အလ်-ရှိုင်ခ် ဒေါက်တာ အားအိဒွ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ္လာဟ် အလ်-ကရ်နီဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်အစ-အဆုံး ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် လင့်ခ်များ-
This entry was posted on February 7, 2013, in ဘာသာရေး, အစ္စလာမ် and tagged ချမ်းမြေ့, ဘာသာရေး, အစ္စလာမ်. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ပေးပို့ခဲ့ပြီးသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာ	မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းလာ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) →